Amazon Kindle 3 Wi-Fi | Avy amin'ny Linux
irephotographies | | maro
Androany izahay dia manolotra ny mpamaky eBook farany (mpamaky boky elektronika) avy amin'ny magazay amerikana fanta-daza Amazon, el Wi-Fi Kindle 3, izay efa misy amin'ny kinova roa, fototra iray misy fifandraisana Wifi ary iray hafa feno kokoa amin'ny fifandraisana 3G.
Ny efijery an'ny Kindle vaovao dia mbola 6 santimetatra Toy ny kinova teo aloha, na izany aza, ity iray ity dia kely kokoa sy maivana kokoa (araka ny hita amin'ny sary), miaraka amin'ny hatevin'ny 8,5mm amin'ny faritra midadasika indrindra.
Kindle 3 Wi-Fi dia misongadina noho ireto manaraka ireto:
- Mampiditra mahasoa izy io Ohatra QWERTY izay manamora tokoa ny fampiasana asa toy ny fitetezana tranonkala.
- Ny efijery misy anao Teknolojia Voahangy, mamadika lahatsoratra sy sary misy fifanoheran-kevitra avo sy fisaintsainan'ny efijery kely.
- Ny hafainganam-pandehan'ny valiny dia iray amin'ireo haingam-pandeha indrindra izay hita ao amin'ny eBooks hatramin'izao.
- Manana tahiry anatiny 4Gb.
Fa toy ny fitaovana rehetra manana ny lafy ratsy koa izy io, ary amin'ity tranga ity dia ireto manaraka ireto:
- Tsy manana slot hamakiana karatra fahatsiarovana izy io.
- Ny menus dia amin'ny teny anglisy ihany.
- Tsy misy fonosana fiarovana na headphone.
- Manana antoka tokana herintaona izy io.
Saingy, amin'ity tranga ity, ny tombony dia mihoatra ny fatiantoka, ary bebe kokoa raha raisintsika ny vidin'ny fitaovana izay tsy mihoatra ny 140 euros ($ 191).
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » maro » Amazon Kindle 3 Wi-Fi
youtopday dia hoy izy:
Rafitra sy rindranasa vaovao ho an'ny e-boky no mivoaka isan'andro, ny marina dia ho an'ireo izay tia mihinana boky dia io no noforonin'ny taonjato. Misaotra tamin'ny fampahalalana. mahafaly
Mamaly an'i Youtopday
FoxTab, fanitarana hitety ireo vakizoro Firefox amin'ny 3D
Ahoana ny fametrahana LAMP amin'ny Ubuntu: ny fomba mora